काठमाडौँ असार, २३ । विगत लामो समय देखी नै भारतमा बस्दै आएका गायककार उदित नारायण झा का छोरा आदित्य नारायण झा अहिले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा छन् । ‘आदित्य नारायण झा लाइभ इन नेपाल’ कार्यक्रमका लागी नेपाल आएका आदित्य गत शनिवार ठमेल स्थित क्लब फरेन्हाइटमा आफ्नो दमदार प्रस्तुति दिएका थिए । मध्यरातमा प्रस्तुतिको लागी स्टेजमा चढेका आदित्यले केही आफ्ना र केही ट्रेन्डिङमा रहेका हिन्दी गीतहरू प्रस्तुत गरे । आदित्यले आफ्ना बुवा उदित नारायण झा ले गाएका चर्चित गीत ‘कुसुमे रुमाल’ ‘यो गाउँको ठिटो म’ बोलको नेपाली गीत गाए । नेपाल आफ्नो…
अस्ट्रेलियामा प्रवेशमा कस्तो अवस्थामा तिनवर्षे प्रतिबन्ध लाग्छ?
* मेरो भिषा बिग्रेको कारणले म अर्को हप्ता नेपाल फर्कँदैछु।यसरी फर्केपछि अर्को तीन वर्षसम्म फेरि अप्लाई गर्न पाइँदैन रे भन्ने सुनेको छु।के यो साँचो हो ? तपाईंले भिषा बिग्रेकोु मात्र भन्नुभएको छ, तर के(कति कारणले कुन भिषा अस्वीकृत -रिफ्युज- वा रद्द-क्यान्सल- भएको हो भन्ने खुलाउनुभएको छैन। त्यसैले तपाईंको प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन अप्ठ्यारो हुन्छ। यद्द्यपि पुनः अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न नपाउने अवस्थाहरूको बारेमा छोटो जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। कसैले आफ्नो भिषाका शर्तहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको पाइएमा उसलाई तीन वर्षसम्म अष्ट्रेलिया फर्कन नपाउने गरेर प्रतिबन्ध लाग्नसक्छ। यस्तो प्रतिबन्ध निम्न अवस्थाहरूमा लाग्न सक्छः…
‘मुना मदन’ यो एक कारुणिक काव्य हो । जुन काव्यले मुना मदनको बिछोडको प्रेम कथाको बारेमा वर्णन गर्छ । मदन पैसा कमाउन भन्दै विदेश गएका हुन्छन् । र उनी फर्कने बेला बाटोमा एकदमै बिरामी पर्छन् । त्यसपछि बिरामी मदनलाई बिच बाटैमा छोडेर उनका साथीहरू आउँछन् । घरमा आइसकेपछी मुनालाई मदनको मृत्युको कुरा मुनालाई भन्छन् । यो कुराले मुनालाई एकदमै पिडा हुन्छ । मुनाले मृत्युको पिडा सहन सक्दैनीन् । त्यही पिडा सहन नसकी शोकमै मुनाको मृत्यु हुन्छ । उता मदनलाई बाटोमा अलपत्र एक जना अपरिचित भोटेले फेला पार्छ । त्यसपछी उसले…